Amaphedi edayimane eTrapezoid Abakhiqizi Nabaphakeli | China Trapezoid diamond pads Factory
Blastrac Concrete Floor Diamond Ukugaya Izicathulo
Izicathulo zokugaya idayimane ze-Blastrac, zingasetshenziswa ku-Blastrac grinder. Ngezigaba ezahlukene zomumo. Izinkinobho eziphindwe kabili, imicibisholo, imigoqo yokugaya phansi.Lawa masegimenti okugaya ibhondi yensimbi angomisa futhi asebenzise amanzi. Amagrits 6#~300# ayatholakala
Ukuthengisa Okushisayo Okuphindwe Kabili Izicathulo Zokugaya Ukhonkolo Zomshini we-Blastrac
Lesi sicathulo sokugaya idayimane se-trapezoid metal bond senzelwe ikakhulukazi izigayi ze-Blastrac floor. Ibonakala ngokucija okuhle nempilo ende. Amasegimenti ethu okugaya amadayimane akhiwe ngokukhethekile aqukethe ukugxila okuphezulu kwamadayimane ebanga lezimboni athuthukisa ukusebenza kahle.
I-Double Bar Segments Blastrac Diamond Grinding Shoes
I-Diamond Concrete Grinding Plates ayisixazululo esingcono kakhulu sezindawo ezinkulu zokususwa kwe-coat encane, ukulinganisa nokushelela izindawo eziphakeme kukhonkolo, futhi zisebenza kahle kakhulu ekuhlanzeni ukhonkolo. Izingxenye zabo zenzelwe ukugaywa kukakhonkolo okunonya ukuze zenze umsebenzi omfushane wamaphrojekthi akho amakhulu.
I-Double Round Segments Trapezoid Diamond Grinding Shoe
Lesi sicathulo sokugaya idayimane esiyindilinga esiphindwe kabili se-trapezoid senzelwe ukugaya ukhonkolo kanye ne-terrazzo floor. Iphawuleka ngokusebenza kahle okuphezulu kanye neminyaka yokuphila ephezulu. Amabhondi ahlukahlukene ayatholakala ukuze alingane nobuso obuqinile obuhlukene.
I-Trapezoid Diamond Grinding Plates Izicathulo ze-Concrete Floor
Amaphedi edayimane asetshenziswa kakhulu kusukela ekulungiseni indawo yaphansi, ukugaya nokupholisha ukhonkolo & i-terrazzo ngokusebenza okuhle kakhulu nokuphumayo, ukwakheka kwezingxenye eziyindilinga kuhlala isikhathi eside futhi ngaphandle kwemihuzuko ejulile esele endaweni ephansi.
Izicathulo zokugaya idayimane eziyi-3-M6 eziboshwe ngokhonkolo
I-Diamond Concrete Grinding Plates ayisixazululo esingcono kakhulu sezindawo ezinkulu zokususwa kwe-coating encane, ukulinganisa nokushelela izindawo eziphakeme kukhonkolo, futhi zisebenza kahle kakhulu ekuhlanzeni ukhonkolo. Izingxenye zabo zenzelwe ukugaywa kukakhonkolo okunonya ukuze zenze umsebenzi omfushane wamaphrojekthi akho amakhulu.
Isigaba esiphindwe kabili esiyindilinga izicathulo zokugaya ukhonkolo we-trapezoid
Lezi zicathulo eziyindilinga zokugaya idayimane zilungele ukugaywa kahle nokulungisa izitezi zokupholisha. Idayimane yezingxenye ezimbili, ukumelana ne-ultra wear futhi ihlala isikhathi eside, ilungele ukugaya okunamandla okusheshayo. Isivinini sokugaya esisheshayo, ukusebenza okuphezulu kwe-abrasive nomsindo ophansi.
Izicathulo zokugaya ukhonkolo we-trapezoid ezinezigaba eziyindilinga eziphindwe kabili
Lesi sicathulo sokugaya idayimane esiyindilinga esiphindwe kabili se-trapezoid senzelwe ukugaya ukhonkolo kanye ne-terrazzo floor. Iphawuleka ngokusebenza kahle okuphezulu kanye neminyaka yokuphila ephezulu. Amabhondi ahlukahlukene ayatholakala ukuze alingane nephansi eliqinile le-cocnrete
Izingxenye ezintathu zedayimane zensimbi kazibuthe izicathulo zokugaya ukhonkolo phansi
Izingxenye kazibuthe zedayimane lensimbi elinezicathulo zikakhonkolo ezigaya phansi, ezingagugi kakhulu nempilo ende. Ukugaya okusheshayo, ukusebenza okuphezulu kokugaya nomsindo ophansi. Izibopho ezihlukene zobulukhuni obuhlukene bokhonkolo phansi. Futhi sihlinzeka ngezinsizakalo zokwenza ngokwezifiso ukufeza noma yiziphi izimfuneko ezihlukile.
2-M8 Ukhonkolo wokugaya izicathulo zaphansi ezinamasegimenti amadayimane angu-3
3 amasegimenti edayimane anohlamvu, abukhali kakhulu, anolaka futhi angagugi kakhudlwanaIzingxenye zedayimane zensimbi ezihlukene zobulukhuni obuhlukahlukene bephansi likakhonkolo. Amagrits asuka ku-6# kuya ku-400# atholakalayo. Futhi sihlinzeka ngezinsizakalo zokwenza ngokwezifiso ukufeza noma yiziphi izimfuneko ezihlukile.
I-concrete Floor Diamond Ukugaya Izicathulo I-Metal Bond Trapezoid Ukugaya i-disc ye-grinder yaphansi
Ngokuyinhloko zisetshenziselwa ukugaya ukhonkolo kanye ne-terrazzo floor. Amasegimenti ethu okugaya idayimane akhiwe ngokukhethekile aqukethe ukugxila okuphezulu kwamadayimane ebanga lezimboni ahlanganiswe nenhlanganisela ekhethekile yezimpushana zensimbi ukuletha ukusebenza okuphezulu ngezindleko eziphansi zokugaya.